PowerPoint – Coupon Machine Social Works
Home /Uncategorized / PowerPoint
bandhigyo Digital ayaa si isa soo taraysa caan sano ee la soo dhaafay, ku dhiira galiyay on by Microsoft ee u labeeyo Arsenal ay software bandhigidda PowerPoint ay Suite software Microsoft Office. Waxay soo guuray ka xabbado iibka iyo warar sano dhamaadka shirkadaha ardayda jaamacadaha iyo hoos dugsiga sare iyo xitaa hadda la socon wararka afka ardayga dugsiga sare-hoose.
Microsoft ee PowerPoint leeyahay magac aqoonsi, laakiin ma ahan software kaliya ee category alaabta this. Like Kleenex ama Xerox, waxa uu noqday ku dhawaad magac generic. Oo waxay noqotay qayb ka mid ah hadal haynta badan, iyadoo bandhig aad u tiro badan oo isticmaalaya foom PowerPoint generic isla halka a drones Gudoomiyaha iyo ku. Waxaa la soo ekaansho sida ‘PowerPointlessness’.
PowerPoint ma aha software bandhig digital kaliya, si kastaba ha ahaatee. Qaar badan oo dadka isticmaala Mac hadda waxa ay isticmaalaan diridda Apple ee, tusaale ahaan. Oo free,-il furan OpenOffice.org ka mid ah caddayn, module PowerPoint-socon a. (Eeg aan tutorial ah oo ku saabsan isticmaalaya yaab).
Hor inta aanad bilaabin
horey u sii qorsheyso. Ka fikir ujeedada aad soo bandhigidda iyo dhagaystayaasha. Ma waxaad doonaya in la abuuro qaab standalone photo in waxaa loogu talagalay in ay sii wadaan aan lala socon? Warbixin isku qoraalka iyo images (iyo optionally dhawaaqa ama video) in lagu lifaaqo warbixin afka ah ama wada hadal? Ha aad horay u leedahay images (iyo music iyo video clips optional) in aad u baahan tahay?
Ka feker in aad qoraalka. Your soo bandhigidda waa in aanay noqon mid aad u text-culus. Text ee bandhigga ah waa in ay soo bandhigaan dulmar ah waxa aad qorsheyneysa inay say– cutubyada ma dhabta ah ee content. Like dulmar ah, waxa ay muujinaysaa points- ugu weyn oo kooban.
Dhab ahaantii, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad qortid dulmar ah ka hor inta aanad bilaabin wax laga galo aad presentation– inkasta oo ay jiraan sidoo kale hab dulmar ah software bandhig aad. Haddii kale, waxaan ku dhiiri dadka isticmaala si ay u diyaariyaan liiska su’aalaha; su’aal kasta (oo dulmar ah jawaabta) si fudud u noqon kartaa slide ah in soo jeedinta.
Fiiro gaar ah: Waxaan isku diyaarinayaa tutorial this isticmaalaya version of PowerPoint ka mid ah Xafiiska Microsoft 2000 for Windows, haddii aad leedahay version a kala duwan oo ka mid ah version Windows ama Mac ee Xafiiska MS, waxaad arki kartaa sanduuqyada wadahadal kala duwan (iwm). Remember– fursadaha software ugu yihiin inay ogaadaan. Haddii aad software muuqataa ka this kala duwan, si xor ah si ay u sahamiyaan oo ay tijaabiyaan.
Marka aad bilowdo PowerPoint 2000, waa in aad fiiri sanduuqa wada hadal ah oo bixiya dhawr deeqood:
Dad badan ayaa u isticmaalaan mid ka mid ah arrimo PowerPoint ee … haddii aad doorato kala doorasho Template Design ah, aad soo bandhigay leh:
Sida aad arki karto, PowerPoint ka mid ah tiro badan oo ah arrimo iyo naqshado bandhigga. Waxaad tahay soo dhaweyn si ay u soo qaado. Si kastaba ha ahaatee, kuwaas oo arrimo premade In ka badan-isticmaalo. Halkii, waayo, tutorial this, waxaan u socoto si ay u bilaabaan la design a bandhig bannaan, ka dibna u astaysto jeeda (iwm) ka dib.
Ku dar aad content
Waxaad la soo bandhigay doonaa la sanduuqa wada hadal Slide New. (Tani arbushin doonaa wakhti kasta oo aad la abuuro slide cusub):
Ogsoonow in marka aad ka dooro mid ka mid ah naqshadaha, ay magaca u muuqataa in hoose-midig. Sidoo kale, la soco in ay jiraan naqshado badan taam ee box– aad hoos ugu rogto kartaa in aad aragto iyo aad u badan. Waxaan ku soo qaadi design saddexaad ee isku xigta-top. The New sanduuqa wada hadal Slide baaba’aa, oo aan screen ka mid ah aragtida dulmar ah bidixda iyo aragti of slide ku yaal dhinaca midig, ii suuro inay soo galaan qoraalka iyo naqshadeynta gelin slide ah. Haddii aad go’aansato in aad rabto in aad design a slide kala duwan, xaq-riix slide ah (ka baxsan goobaha text ama muuqaallo kala duwan) iyo dooran ka menu gujisid ah Slide Layout. Haddii kale, click menu Format iyo doortaan Slide Layout. Si kastaba ha ahaatee, aad arki doonaa sanduuqa isla wada hadal mar kale (laakiin cinwaankeedu Layout Slide) daynin aad bedesho qaabka.
Sameynta in, waxaan bedelay si khariidad la text on bidix iyo qolka sawir on xaq u.
Dadka qaar ayaa fiican la abuuro outline– ah isticmaalaya Murayaad dulmar bidixda ka shaqeeyaan; dhibic kasta ugu weyn wuxuu noqon doonaa slide cusub, la-dhibcood sub ilaa muujinaya sida qoraalka bulletted. (Muhiimka ah tab Press si ay u sameeyaan a sub-point- gala by laftiisa abuuraa slide cusub. Haddii aad Raar meel aad u fog, qaban baddalo hoos halka riixaya tab inay dib bidixda guuraan). Dadka kale waa raaxo badan teeb si toos ah in ay leeg- eegis slide ah.
Waxaa jira waxyaabo badan oo ah ‘nacnac isha’ in software bandhig … waxaad ku Bixisaan karaa xaddi weyn oo waqti fiddling la noocyada, tirada, animations, gudubka, soo jeeda, iyo qaar kaloo badan. talooyin My:
Ku dar aad text aasaasiga ah iyo sawirada ugu horeysay … marka aad heysato content oo dhan soo galay, ka dibna (haddii waqtigu saamaxo) kaman la soo jeeda, gudubka, iyo animations (si).
nacnac isha More khasab ma aha in si fiican. Way fududahay in la abuuro bandhigid in ka Shuqlinayn aad dhagaystayaasha ka content. Is weydii haddii aad soo bandhigidda waa wax ku ool ah ee xidhiidhka la maqlayo. Ha ku darin saamaynta gaar ah oo keliya, maxaa yeelay, aad kari karto!
Sida ay u muuqato in sawir ah, haddii aad jeceshahay in ay ka shaqeeyaan slide-by-slide (halkii in guddi dulmar ah), riix meesha ay ku haboon tahay in lagu daro horyaalka ah iyo qoraalka si aad slide. Ogsoonow in markii aad ku dari text si column-gacanta bidix, by default ay u muuqato mid Xabbadeysan. (Waxaad ka bedeli kartaa la item Rasaasta iyo tiriyey reer menu Format ah, ama adigoo gujinaya item Rasaasta ee toolbar ah).
Double-riixaya sawirka kuu ogolaanaysaa inaad ka Microsoft ee Clipart Gallery dar clipart. Waxaad ka raadin kartaa images by category ama keyword. Iyadoo clipart waxaa loo isticmaali karaa in aad soo bandhigidda arrimaha aan wax copyright, mar kale, waa xoogaa isticmaalaan iyo cliched. Waxaad doorbidi kartaa in aad isticmaasho sawiro kuu gaar ah, ama clipart ilo kale. Si taas loo sameeyo, riix menu Insert ah, dooro Picture dibna From File …
Waxaad yeelan doontaa in ay maraan in folder meesha aad ku kaydin sawiro digital ama images kale., Laga bilaabo off ee folder Windows My Pictures. Waxaad tahay awoodaan in ay ku eegaan images hor doorashada mid.
Waxaa laga yaabaa inaad ucabirto image ah laga keeno si ay u haboon in aad design.
Si aad ku dari slide kale, guji menu Insert ka dibna dooro Slide New. Mar kale, aad arki doonaa sanduuqa wada hadal Slide New inay qaado design slide ah. Ku celi sida loogu baahan yahay.
Haddii loo maleeyo in aad abuuray bogagga oo dhan, iyo ku daray aad qoraal iyo sanamyadii, oo aad go’aan ku gaadhi kartaa in aad rabto in aad wax kale oo aan ahayn soo jeeda cad cad. Si aad u bedesho asalka on mid ka mid ah (ama ka badan) raaceyso, dooro slide ah liiska Slides bidixda. Markaas riix menu Format, ka dibna dooran jeeda. Waxaad arki doonaa:
Waxaan helay p op-up sare
adigoo gujinaya fallaadha yar oo ayan meel madhan dhow hoose ee sanduuqa wada hadal hore … laakiin xitaa tani waa go’an quruxsan caato ah ee doorashooyinka. Guji Colors More … si aad u aragto:
Tani (ama tab Custom ah) siinaysaa fursado midabka fog dheeraad ah. Haddii kale, gujinaya Buuxi Raadka (fiiri kor) siinaysaa kala doorashada badan:
U fiirso in aad leedahay dhowr tabs. Gradients habsami beddelo mid ka mid midab in kale, in siyaabo kala duwan. Waxaad ka qaadan kartaa midab kasta, ka dibna style ee isbedelka. Texture leedahay noocyo kala duwan oo soo jeeda, sida marmar ah, denim, warqad brown, iwm Qaababka waa (cadaalad caajis) cross dillaacaan iyo plaids, halka tab Picture u ogolaanaysaa inaad dooro sawir ku kaydsan wadid aad u adag.
Marka aad dooran asalka ah, waxaad fursad u haysataa in ay ka codsan in slide hadda-xulay ama in bogagga oo dhan.
Ogow in haddii aad doorato asalka mugdi ah, waxaad ka heli kartaa in aad qoraal noqdo yar akhrin karo. Haddii ay sidaa tahay, waxaad bedeli kartaa asalka, ama bedesho midabka font. Si aad u bedesho midabka font ee, dooro goosin ka mid ah qoraalka (waxaad u baahan doontaa in ay doortaan block kasta oo text on slide kasta si gaar ah), ka dibna riix on menu Format oo dooro Font. Waxaad arki doonaa shay oggolaanayo in aad bedesho midabka ah ee qoraalka la doortay.
Haddii kale, waxaad bedeli midabka ah ee dhan horyaal ama Text oo dhan hal mar. Si taas loo sameeyo, riix menu Format iyo Color Scheme xulo Slide. Tag tab Custom ah, riix item ah in la beddelo, iyo riix badhanka Change Color:
Mar kale, waxaad dooran kartaa in isbedel oo kaliya in ay slide hadda ama dhamaan bogagga ka dhigi.
Guur waa saamaynta gaar ah oo optionally qaadan meel marka slide cusub u muuqataa shaashadda. Tastefully sameeyey, iyagu waa lagu daray. Doorashada kala duwan, kala guurka ah oo adag for slide kasta mashquulin karaan ka hadal. Oo weliba, gudbayo adag laga yaabaa in aan si habsami muujiyaan on ka weyn hardware– xataa haddii ay u muuqdaan in ay soo bandhigaan si habboon in eegis ku. Had iyo jeer hubi gudbayo aad by ordaya aad slide show.
Si aad u codsato kala guurka ah si ay slide ah, dooro slide ah, ka dibna riix on Slide Show menu iyo dooran guurka Slide. Waxaad arki doonaa:
Waxaad eegi kartaa liiska gudubka; kasta loo isticmaali doonaa si sawirka lo’da si aynu aad aragto sida ay waajibka ku ah inay eegto. Waxaad go’aansan kartaa in ay sameeyaan guurka (iyo isbeddelka in slide xiga) waxay dhacdaa marka aad riix si aad mouse ama si toos ah ka dib markii dib u dhac doorashadaada waqti, oo aad dooran kartaa in aad leedahay play dhawaaqa optional marka isbedel slide.
Ugu dambeyntii, waxaad samayn kartaa goobaha kala guurka khuseeya hal, slide ee la doortay ama dhamaan bogagga aad.
Ka taxaddar leh animations
All hesitations aan ka qabto gudbayo laab khuseeyaan animations. Iyadoo gudbayo yihiin saamaynta quseeya slide oo dhan marka hore u muuqataa, animations yihiin saamaynta gaar ah laga codsadaa in ay blocks gaarka ah ee qoraalka (xitaa in warqado hal) ama in sawiro, ka dib markii slide ayaa u muuqday.
Ma doonayo inaan si ay u tagaan si faahfaahsan oo ku saabsan animations; si ay u helaan qaababka kuwan, marka hore dooro goosin ka mid ah qoraalka ama sawirka si nooleyn, ka dibna riix on Show Slide menu. Horena Animation idin siinayo set ah presets; Custom Animation ku siinayaa fursado dheeraad ah.
Haddii aad u malaynayso in aad rabto in aad isticmaasho habkaani, tijaabiyaan! Xusuusnow, si kastaba ha ahaatee, in ka badan isticmaalka animations caanuhu aad bandhig, ka Shuqlinayn dhagaystayaasha ka content, iyo tegi karo daawadayaasha qaar ka mid ah war wareer.
Turning aad bandhigga galay bogga a
Waxaad isticmaali kartaa PowerPoint in jeedi bandhig galay taxane ah oo lala of pages web; inay sameeyaan, riix menu File ah, ka dibna badbaadi sida Web Page. la keeneen in doonaa in aad meel iyo magac file waayo website aad ku badbaadi … si adag kuugu Waxaan ka codsanayaa in la abuuro gal ah si uu u qabto faylasha badan in la abuuri doono. Sidoo kale waxaan soo jeedin lahaa in aad webpage magaca faylka ‘index.html’, taas oo uu leeyahay macnaha waxtar leh oo gaar ah si ay barnaamijyada server web siinayo.
In mudo ah, aad website waa in la abuuray meesha aad dooratay. Waxaad ku arki kartaa in browser web adigoo gujinaya PowerPoint ee File menu iyo xulashada Page Kulanka Xiisaha Web. Tani furi doonaa bogga bilaawga your site ee. The naadiya button in Save sida Web Page wada hadal siinayaa qaar ka mid ah fursadaha laga yaabo waxtar leh:
Waxaad dooran kartaa in kaliya daabacaan bogagga soo xulay. Oo anigu waxaan ku talin lahaa doorashada si ay u taageeraan version 3.0 daalacashada.
Daabacaadda Qoraalkan a
Doorashada si qor qoraalkan bixisaa dabacsanaan badan si fudud daabacaadda slide kasta si gooni ah page– kastoo muhiim u noqon kara haddii aad rabto in aad la abuuro acetates si ay u muujiyaan on borojektar ah dusha.
Taabashada File markaas Print aad u helo fursado badan aad arki karto in daabacaadda document processor eray:
Fiiro gaar ah waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad doorato daahir Black and White ama cabbircawl, iyo inay qaaddo in ay ku habboon warqad, ama ka mid ah jir ah oo ku wareegsan dhinac ah. Sidoo kale xiiso leh waa ikhtiyaarka kaliya daabacan ee dulmar, qoraalo, ama qoraaladan. Waxaan ka heli Qoraalkan daabacaadda gaar ahaan waxtar leh. Haddii aad soo qaado in, aad waxaa la siiyaa fursado si ay u doortaan sida badan bogagga per page– 4 ilaa 6 bogagga per page sameeyaan doorasho fiican.
Xunna, haddii aad doorato cabbircawl ama saafi madow iyo caddaan, soo jeeda aad midab iyo midabkiinaba text waxaa discarded– qoraaladan aad si cad qoraalka madow ku saabsan asalka cad daabacan doonaa.